Ungazikhuphela njani iividiyo ze-Instagram kwi-Android, i-PC okanye i-iPhone | Iindaba zeGajethi
Uyikhuphele njani ividiyo kwi-Instagram
U-Eder Esteban | | Izicelo, Tutorials
Ividiyo ibe yenye yeefomathi ezisetyenziswa kakhulu kuthungelwano lwentlalo. Ngalo lonke ixesha sibona ukuba zenzeka njani amathuba amaninzi xa ufaka iividiyo kwinethiwekhi ezinje nge-Instagram, Esineqonga elitsha levidiyo. Nakwezinye iinethiwekhi zentlalo ezinje nge-Facebook okanye i-Twitter inendima ephambili. Nangona enye yeengxaki abajongana nazo abasebenzisi yindlela yokukhuphela ezi vidiyo zilayishwe kwinethiwekhi yoluntu.
Kutshanje sikubonise indlela esinokuthi ngayo Khuphela iividiyo zeTwitter. Ngoku lithuba lokwenza okufanayo nge-Instagram. Inethiwekhi yokuncokola yeefoto ishiya indawo engakumbi nangakumbi yeevidiyo, kwaye kunokubakho enye oyithandayo kwaye ufuna ukuba nayo kwikhompyuter yakho okanye kwifowuni egciniweyo.
I-Instagram ayisiniki isixhobo sendalo esivumela ukuba sikhuphele ezi vidiyo ukuba abanye abasebenzisi bayilayishe. Ke siyanyanzelwa ukuba sisebenzise izixhobo zomntu wesithathu ukuze sikwazi ukuzibamba. Ngethamsanqa, ukukhethwa kwezi zixhobo kuye kwanda kakhulu ngokuhamba kwexesha. Ke kuya kusiba lula.
Apha sichaza ifayile ye- indlela esinokuzikhuphelela ngayo ezi vidiyo ngokuxhomekeke kwisixhobo. Nokuba usebenzisa inethwekhi yokuncokola kwifowuni yakho ye-Android, kwinguqulelo yedesktop okanye kwisixhobo se-iOS. Ke, unokuzikhuphelela ezi vidiyo nangaliphi na ixesha ngaphandle kwengxaki.
1 Khuphela iividiyo ze-Instagram kwi-Android
2 Khuphela iividiyo ze-Instagram kwiPC
2.1 Khuphela ngqo
3 Khuphela iividiyo ze-Instagram kwi-iPhone
Khuphela iividiyo ze-Instagram kwi-Android
Inethiwekhi yentlalo yenzelwe iifowuni eziphathwayo, nangona ibinenguqulo ye-desktop yayo ixesha elide. Kodwa uninzi lwabasebenzisi bayayifumana kwi-smartphone yabo. Ukuba unayo ifowuni ye-Android, sifumana iindlela ezininzi zokukhuphela ezi vidiyo. Eyona ndlela ilula kukusebenzisa usetyenziso. Kwivenkile yokudlala sinenani elikhulu leapps ezisinika oku kunokwenzeka.
Olona khetho lulungileyo kulo mbandela kukuKhuphela iVidiyo kwi-Instagram. Enkosi kule app, esinokuzikhuphelela simahla kule khonkco, sinokuzikhuphelela iividiyo kwifowuni yethu ye-Android ethi abanye abasebenzisi bayilayishe kwinethiwekhi yoluntu. Kwaye indlela esebenza ngayo ilula ngokwenyani, ke asizukubaneengxaki malunga noku. Xa sele ukhutshiwe, kufuneka singene kwi-Instagram uqobo.
Apho kufuneka sifumane ividiyo esiyibonileyo enomdla kuthi. Siza kucofa kumanqaku amathathu athe nkqo avela phezulu kwicala lesikrini. Siza kufumana iindlela ezininzi kwimenyu yokuma, phakathi kwazo thina Sifumana ithuba lokukopa i-URL yeso sithuba. Siza kucofa olu khetho kwaye i-URL iya kukhutshelwa kwibhodi eqhotyoshwayo. Emva koko, singena kwi-app esiyikhuphele kwifowuni yethu ye-Android.
Ngaphakathi kwesi sicelo, into ekufuneka siyenzile kukuncamathisela i-URL esisanda kuyikopa. Ividiyo esiyibonileyo kwi-Instagram kwaye sifuna ukuyikhuphela iya kuboniswa kwiscreen. Kuya kufuneka ucofe kwi icon yesabelo, apho ke siya kuba nethuba lokuyikhuphela. Cofa kolu khetho kwaye ukhuphelo luya kuqala. Kwimizuzwana embalwa siya kuba nevidiyo kwifowuni yethu ye-Android.
Khuphela iividiyo ze-Instagram kwiPC
Inguqulelo yedesktop yesicelo sele ifumana ubukho. Okwangoku sinokwenza inani elikhulu lezenzo kuyo, iyasivumela ukuba sihambe phakathi kweeprofayili zezo akhawunti sizilandela ngendlela entofontofo. Ke ngoko, sinokuhlangana nevidiyo ngamanye amaxesha. Kwaye ukuba sisebenzisa ikhompyuter, ngeGoogle Chrome njengesikhangeli, sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo.
Kukho iqhinga elilula kakhulu elisivumela ukuba sikhuphele iividiyo ngaphandle kwesidingo samaphepha okanye ukufaka ulwandiso kwisikhangeli. Into ekufuneka siyenzile kukuba ngenisa iprofayile ye-Instagram apho ividiyo inomdla kuthi IU.S. Xa sikwiProfayili kwaye ividiyo ibekwe kuyo, sicofa kuyo, ngaphandle kokungena eposini. Emva koko sikhethe ukhetho "lokuvula ikhonkco kwithebhu entsha".
Xa sivula kwithebhu entsha, idilesi yevidiyo yinto enje: https://www.instagram.com/p/Bpw1bBIl775/. Ekuphela kwento esiza kuyenza kukuguqula kancinane i-URL. Kuya kufuneka ukongeze i-qq ngaphambi kwe-Instagram, kwaye ke siya kuba nakho ukuyikhuphela. Ke i-URL iya kuba yile: https://www.qqinstagram.com/p/Bpw1bBIl775/. Emva koko siye sangena kwi-bar yedilesi.
Kuya kuthatha ixesha, kodwa kuya kukhokelela kwi iphepha apho sinokuzikhuphelela khona ividiyo ngqo. Iqhosha lokukhuphela liza kuvela kwiscreen, le yona ekufuneka siyicinezele kule meko. Ke, sikhuphela ividiyo kwikhompyuter yethu ngendlela elula.
UGoogle Chrome unenani elikhulu lezandiso ezikhoyo, enkosi apho sinokuzikhuphelela khona ezi vidiyo sizibona kwi-Instagram kwi-PC yethu. Ke, kuya kufuneka sifakele ulwandiso kwaye xa sibona ividiyo, kufuneka ucofe iqhosha lokukhuphela, eliqhuba inkqubo ngendlela ephawuleka.
Kukho ulwandiso olulungileyo oluya kusivumela ukuba silande zonke iintlobo zomxholo olayishwe kwinethiwekhi yoluntu. Ulwandiso lombuzo lubizwa ngokuba ngumKhupheli we-Instagram, onokuzikhuphelela kwiChannel kule khonkco. Enkosi ngayo, uya kuba nakho ukukhuphela iifoto kunye nevidiyo ezifakwe kwinethiwekhi yoluntu. Ukusebenza kwayo kukwalula kakhulu, xa siyifaka kwisikhangeli, kufuneka singene kwinethiwekhi yoluntu.
Xa ufaka iprofayili, ukuba sibeka isikhombisi kwividiyo okanye kwifoto, siza kubona oko sikufumanayo phezulu kwayo ukhetho lokukhuphela. Ke kufuneka sicofe kuyo, ukuze sikwazi ukukhuphela ividiyo okanye ifoto enomdla kuthi ngendlela elula. Ziza kukhutshelwa ngokuzenzekelayo kwikhompyuter kwaye ngoku sinokugcina okanye sisebenze nabo. Kwimeko yeevidiyo, zihlala zikhutshelwa kwifomathi ye-MP4.
Khuphela iividiyo ze-Instagram kwi-iPhone
Nge-iPhone kwenzeka into efanayo nge-Android, Olona khetho lubalaseleyo nolulula kule meko kukusebenzisa usetyenziso. Kwivenkile yosetyenziso sifumana iindlela ezininzi zokukhuphela iividiyo kwi-Instagram, ezisebenza ngendlela efanayo. Ukhetho olulungileyo, olunemilinganiselo efanelekileyo yomsebenzisi, yiRegrammer, onokuyikhuphela kule khonkco.
Xa siyifakile kwi-iPhone, kufuneka yiya ku-Instagram kuqala kwaye ujonge ividiyo enomdla kuthi kule meko. Kwindawo ephezulu yesikrini sifumana amanqaku amathathu athe nkqo, ekufuneka sicinezele kuwo. Ngokwenza njalo, iindlela ezininzi ziya kuvela, phakathi kwazo sifumana enye yokukhuphela i-URL yale vidiyo. Sinqakraza kuyo.
Emva koko singena kwiRegrammer kwaye siza kubona ukuba ibhokisi iyavela kwiscreen. Oko kufuneka sikwenzile kukuncamathisela i-url esisandula ukuyikopa kuyo. Emva koko nqakraza kwiqhosha lokujonga kuqala ukuze ubone ukuba yeyiphi ividiyo esinomdla wokuyikhuphela. Emva koko, cofa kwiqhosha lesabelo kwaye siza kufumana iindlela ezininzi. Kufuneka sibethe isave.
Ngale ndlela, ividiyo iya kugcinwa kwi-iPhone yethu. Ke inkqubo yokukhuphela ividiyo kwi-intanethi eyaziwayo yentlalo ilula kakhulu enkosi kule sicelo simahla se-iPhone
Ngaba uyafuna ukufumana abalandeli kwi-Instagram? Fumanisa iingcebiso ezilungileyo zokwenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Izicelo » Uyikhuphele njani ividiyo kwi-Instagram
Uyisebenzisa kanjani i-AirDrop kwizixhobo ze-iOS kunye neMacOS
Uhlalutyo lweAmazon Echo Plus entsha, elawula indlu yethu ngezona zixhobo zilungileyo